Congo: Wasiir sheegay in kharashka doorashooyinka aanay awoodi karin - BBC Somali
Congo: Wasiir sheegay in kharashka doorashooyinka aanay awoodi karin
Image caption Madaxweyne Kabila dadka ka soo horjeedaa waxay ku eedeeyaan inuu doorashada dib ugu dhigayo si uu awoodda u sii haysto
Dawladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa sheegtay in aanay awoodi karin in ay u hirgeliso doorashooyinka madaxtinimada sannadkan sidii lagu heshiisay.
Wasiirka maaliyadda, Pierre Kangudia, ayaa sheegay in kharashka ku baxaya abaabulka doorashooyinku yahay 1.8 bilyan oo doolar, taas oo ah buu yidhi qiime aanay dawladdu awoodi karin.
Sannadkii hore ayaa xukuumadda iyo mucaaradku waxa ay ku heshiiyeen in doorashooyinka la qabto dabayaaqada sannadka 2017.
Madaxweyne Joseph Kabila ayaa mudadii xilkiisa ee sharcigu ogolaa waxay ku ekayd bishii Noofember 2106, waxaana ay dadka ka soo horjeedaa ku eedeeyeen inuu kolba dib ugu dhigayo doorahada si uu awoodda u sii haysto.
Qorshihii lagu heshiiyey ee ahaa in doorashada la qabto inta aanu dhamaan sanadka 2017 ayaa hoos u dhigay xiisaddii dhex taallay dawladda iyo mucaaradka.
Gudida doorashooyinka ayaa sheegay bishii Noofember ee hore in ay u baahanyihiin muddo ku siman ilaa July 2017, si ay u diiwaan geliyaan in ka badan 30 milyan oo qof oo ku nool dal bedkiisu leegyahay Yurubta Galbeed oo dhan, laakiin waddooyinkiisa iyo shabakadaha isgaadhsiintiisuba yihiin kuwa ugu xun dunida.